Soomaaligii ugu horeeyay ee loo xusho ka mid noqoshada Akadamiyad caalami ah - BBC News Somali
wuxuu qoray bugaag badan oo Af-ingiriisi ah
Akadamiyadaas oo ah tan ugu faca wayn oo ay ku kulmaan aqoonyahannada ayaa waxaa la aasaasay sanadku markuu ahaa 1780-kii,iyadoo dadka ku biira inta badan lagu xusho aqoonta iyo in uu yahay qofku mid wax faa'iido leh ku soo kordhiyay bulshada .
"Dareenkeygu waxaa weeye intaas oo sano maadama aan soo dadaalayay in ay noqto dedaalkii miro dhal wanaagsan in aan ka gaaray " ayuu yiri Qoraa Nuuradiin Faarax.
Sidoo kale waxaa ka mid ah waxyaabaha xaruuntaan dadka ku xulato in qofku uu sameyay waxyaabo dhaxal noqon kara oo ay ka faa'iideysan karaan jiilasha dambe iyo aragti dheer oo ka qayb ka qaadan karta haggaajinta caqabadaha u baahan xalinta.
"Soomaalida waxey u soo kordhineysaaa in wiilka ama gabadha yar ee hadda bilaabay in ay wax qoraan in ay ku hami karaan in Akadamiga Mareykanka ama Talyaaniga ama kan Faransiiska ama kan Carabta in ay ka qayb gali karaan meel ka sareysa meeshii u sareeysay ruuxii in uu gaaro in uu ku dayan karo Nuuradiinba waa sameyay anna waan sameyn karaa " ayuu raaciyay Nuuradiin Faarax.
Xigashada Sawirka, Akadamiyadaan Farshaxanka iyo Sayniska Mareykanka
"Waxey isii dhiirogelineysaa wixii aan qoray awal wax ka wanaagsan aan qoray dadka aan hadda dhinac ordayo waa dadkii aduunkoo dhan loo maleynayo marka ay timaado qoraalka " ayuu yiri Nuuradiin .
Macalimiinta cashirrada siiya ardayda iyagoo ku jira jiidda hore ee dagaalka